भ्रष्टाचारीहरु राजनीनामा दिएर भाग्ने स्थितिमा पुगेः प्रधानमन्त्री ओली (विशेष अन्तर्वार्ता) « Dainiki
भ्रष्टाचारीहरु राजनीनामा दिएर भाग्ने स्थितिमा पुगेः प्रधानमन्त्री ओली (विशेष अन्तर्वार्ता)
प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँलाई कार्यक्रममा विशेष स्वागत छ !
–यो आधार वर्ष भनिएको–सरकारको, संसदको यस कार्यकालको लागि मात्रै होइन् । संविधान बन्यो । संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन थिएन् । संविधानले संरचनाको कल्पना ग¥र्यो । संरचना थिएनन् । निर्वाचन भयो । निर्वाचन भएपनि प्रतिनिधि सभा कता बस्ने, राष्ट्रिय सभा कता बस्नेदेखि लिएर….
प्रदेश सभा कहाँ बस्ने, प्रदेश सरकार कहाँ बस्ने..
–केही पनि थिएन् । २० वर्षदेखी स्थानीय निकायहरु रित्त थिए । त्यस अवस्थामा संरचनागत पक्षको तयारी गर्नु आवश्यक थियो । कर्मचारीहरुको संमायोजन गर्नु जरुरी थियो । यो अभ्यास, विल्कुलै नयाँ अभ्यास । यो सङ्घीय शासन प्रणाली नेपालको इतिहासमा पहिलो, पृथक । यो असजिलो प्रणाली हो । अर्को तिर कुनै अभ्यास नभएको । कुनै दृष्टान्त नभएको । कुनै उदाहरण नभएको । कुनै नजिर नभएको । त्यस्तो व्यवस्था हो । जो आफैले नयाँ अभ्यासद्धारा नजिरहरु अनुभवका आधारमा स्थापीत गर्दै जानुपर्छ । अर्को तिर लोकतन्त्र, मैले भन्ने गर्छु यो वेयस्टमिस्टरीयल(पश्चिमा ) प्रणाली हो । तर यो संसदीय व्यवस्था ठ्याक्कै त्यस्तो होइन किन यसमा यो जे कम्पोनेन्ट छ, त्यो पृथक छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली, समावेशीताको प्रणाली । यस्ता कुराहरु यसभित्र छन् । जसले गर्दा यसलाई साधारण संसदीय प्रणाली भन्दा पृथक बनाएको छ । यो आफैमा अभ्यास गर्न सजिलो कुरा होइन् ।
आज हामी त्यस विन्दुमा छौं र विकासको अब हामीले एउटा नयाँ संकल्प कृषिको सम्बन्धमा–कृषिको आधुनिकीकरण, उद्योगको–उद्योगको निम्ति आन्तरिक र बाह्य पुँजी परिचालन गर्न आकर्षक, ऐन, कानुन बनाउनेदेखि लिएर वातावरण बनाउनेदेखि लिएर, एकद्धार बनाउनेदेखि लिएर, प्रशासनीक उल्झन्, झन्झटहरु समाप्त पार्नेदेखि लिएर यी सब कामहरु गरिएका छन् । र, नीतिहरु तय गरिउको छ अब । कृषि मात्र भनिएको छैन् । कृषिको आधुनिकीकरण कसरी गर्ने ? त्यस सम्बन्धमा हामीले, म जुन देशमा जान्छु त्यहाँ कृषिको, जुन देशमा जान्छु त्यहाँ आधुनिकीकरणको, जुन देशमा जान्छु त्यहाँ प्रविधिको । ती चिजहरुलाई कसरी हाम्रो विकासमा जोड्न सकिन्छ वा ल्याउन सकिन्छ । ती कुराहरु म गरिराखेको छु ।
यसरी मेरो नेतृत्वको यस सरकारले, एउटा मान्छेहरुलाई के भ्रम हुनुहुदैन भने कतिपय साथीहरुमा अलिकति असन्तुष्टि पनि छ, स्वाभाविक पनि हो । त्यो असन्तुष्टि आफ्नो ठाउँमा होला । तर, हामी एउटा नयाँ ढंगले, नयाँ तरंग आएको त यसै बुझ्न सकिन्छ । बाहिर जानेको संख्या घटेको छ, कामदारहरुको । रेमिटयान्स बढेको छ । नियमित गरिएको छ । नियमन गरिएको छ । बाहिर जाने आवश्यकताअ घटेको छ । ठुलो संख्यामा ३९ प्रतिशत संख्या घट्नु भनेको सानो कुरा होइन् । ३१ प्रतिशत आम्दानी बढ्नु, त्यसबाट रेमिट्यान्स बढ्नु यो पनि ….। ३९ प्रतिशत घटेपछि त ३९ प्रतिशत घट्नु पर्ने थियो । ३१ प्रतिशत बृद्धि भएको छ । यथार्थ नियमन भएको छ र बाहिर जाने आवश्यकता न्यून भएको छ ।
यहाँले शास्त्रार्थको कुरा भन्ने, चाडक्य (कौटिल्य)को नीति भन्ने गरेको कारणले मैले यहाँलाई सम्झाउँ, कि एकठाउँमा कौटिल्य भन्छन्, सागर वा नदीमा मसली कित्ना पानी पिताहे, किसीको पतानाइ, प्रशासनमा कित्ने हततक भ्रष्टाचार होताय उसकोवी पतानाई । लेकिन विद्यि हे । इसिलिए यैसा गर्न पड्ताए । भनेपछि यहाँले बुझिहाल्नु भयो । त्यो काम इमानका साथ गरेको छुँ भन्न सक्नु हुन्छ आज ?
–गजवले ! मज्जाले ! अहिले म तपाईंतिर हेरिरहेको छु र यो टेलिभिनमा प्रसारण हुदा तपाईंतिर हेरेको जस्तो देखिन्छ । म क्यामेरा तिर हेरेर भन्न चाहन्छु, जुन दर्शकतिर हेरेको देखिन्छ–म भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न दिन्न । अरुलाई पनि गर्न दिन्न ।
एउटा त्यो भयो, अझ मैले अघि माछाको भने जस्तो गर्दा त्यसको विद्यि छ । त्यसको विद्यि भन्दा यहाँले सम्झि हाल्नु भयो….
–पार्ट हो । अर्को हामीले अस्तिका दिन एउटा कार्यक्रम अगाडि बढायौं, रोजगार सम्बन्धी र अब यति ठुलो ऐतिहासिक मात्रै होइन् महत्वकाँक्षी, असाधारण । बेरोजगार देशमा रोजगार दिन नसके दण्ड तिर्छु, पैसा तिर्छु भन्ने राज्य ..
अर्को वर्ष हामीले कुरा गर्दा त्यो गल्ति गरिएछ कि क्या हो भन्ने पर्ला ?
नाम जेहोस् तर आम जनता सहभागि हुने र आयआर्जनको सबै भन्दा महत्वपूर्ण सुरक्षित…
यस्ता थुप्रै कार्यक्रमहरु जुन तपाइँको भाषणमा, सम्बोधनमा पनि आएका छन । ठ्याक्कै यो सङै भन्नु पर्दा प्रधानमन्त्रीज्यु, सबै शक्तिको केन्द्र आफुमा ल्याएर प्रधानमन्त्री के.पी ओली एउटा डिक्टेटर शिपको रुपमा अगाडि जान चाहन्छ, भन्ने आरोप त तपाईंले सुन्नु भाको होला? जस्तो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, जुन अगाडि हामीले गरेका कुराकानीको लागि जरुरी थियो की एउटा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने मान्छेले, आफू भन्दा तल कति ठूलो बद्मासी भएको छ भन्ने अनुगमन गर्नका लागि आवश्यक थियो ? सौद्धान्तिक राजनीतिक रुपमा नै । हिजो विश्रृङ्खलित पारिएर देशलाई खोक्रो बनाइएको थियो । तर तपाईको अभिलाषा समृद्धिको आधारलाई अगाडि बढाउन हो वा, शक्तिको श्रोत सबै ल्याउन र पदमा अजम्बर जीवि बन्नको लागि हो????
जनताबाट दिइएको अधिकार प्रयोग गर्न उनीहरुले संविधान निर्माण गर्छन । एउटा पुस्तकमा जनताका सम्पूर्ण अधिकारहरु, आंकाक्षहरु तिनीहरु चाहि त्यहाँ संगठित ग¥या हुन्छ । अनि त्यस कितावले सबै चलाउछ । न्यायलयलाई पनि त्यसैले चलाउछ, सरकारलाई पनि चलाउछ र सरकारलाई निदृष्ट गरेर उसले जनताले त्यस पुस्तक मार्फत अधिकार तोकेर दियएको छ, यो यो अधिकार भनेर। यसरी सरकारका आफ्ना काम, कर्तव्य छन् र प्रधानमन्त्रीका आफ्ना काम, कर्तव्य छन् । कुन लिएर, कुन छोडेर, कसो गरेर भन्ने कुरा होइन । अहिलेको प्रधानमन्त्री जसले एउटा मन्त्रालय राख्दैन् । कुनै मन्त्रालय राख्या छ र ? कसैले रक्षा आफुलाई चाहिन्छ भन्छ । कसैले अर्थ चाहिन्छ भन्छ । कसैले परराष्ट्र चाहिन्छ भन्छ । कसैले के चाहिन्छ भन्छ । अनि पावर केन्द्रीत गर्नको लागि कोही कोही देशमा १० वटा विना विभागिय मन्त्री प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएको हुन्छ । ता कि सम्पूर्ण कुरालाई त्यहाँबाट कन्ट्रोल गरियोस् । तर यहाँ त्यो पनि गरिएको छैन ।
ठ्याक्कै प्रधानमन्त्रीज्यू अर्को यहाँलाई चाहिने आरोप, आरोपका रुपमा के छ भने यो सरकार मिडिया फ्रेन्डिली छैन वा प्रेस स्वतन्त्रता फ्रेन्डिली छैन । त्यसको विरोधी छ भन्ने जस्तो चर्चा परिपर्चा यहाँले विभिन्न एङ्गलबाट सुन्नु भयो होला । ईभन डार्वोसमा यहाँ जादा खेरी पनि त्यहाबका विश्वप्रसिद्ध न्यू योर्क टाईमसका पब्लिसरले पनि यहाँलाई प्रश्न सोध्नु भो हैन जुन ईन्टेन्सन् जे सुकै होला । त्यसको बारेमा यहाँको फिलिङ्ग के छ ? यो सरकार वा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार प्रेस विरोधी छ ?
यस भित्र बट एण्ड इफको कुरै छैन । यसमा कुनै बाहाना वाजिको पनि कुरा छैन । फेरि अर्को कुरा, अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने मेरो वोल्ने हक छ, वाक् स्वतन्त्रता मसँग छ । तर मैले तपाईलाई अपमान गर्न मिल्छ ? तपाईको आत्म सम्मानको पनि हक छ । त्यो पनि हक छ नि । अनि यो हकको प्रयोग गर्दा त्यो हक थिचो मिचो गर्न हुन्छ कि हुदैन ? मसँग बोल्ने हक छ, मैले तपाई प्रति झुटा आरोप लान्छनाहरु लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? तपाईप्रति अमर्यादित, अश्लिल, स्तरहिन कुराहरु बोल्न हुन्छ कि हुदैन ? यस्तो हुँदैन है भन्यो भने प्रेस स्वतन्त्रता समाप्त भयो, प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कुरा भो भन्नु कति वान्छनीय हुन्छ ? कतिवटा सामाजिक सञ्जालमा यस्ता कुराहरु आएका हुन्छन् । ती कुराहरु यति तल्लो स्तरका छन् । यति समाजलाई हानिकारक छन् । यति नयाँ पीडिलाई विगार्ने खालका छन्, हानि गर्ने छन् । ति कुराहरु, ति कुराहरुको पक्षपोषण गर्न मिल्छ ?
अस्ति म आश्चर्य लाग्यो सदाचार नीतिको विरोधमा मच्चियो र वक्तव्य बाजि अनेक भए । सदाचार त्यो कही पास भको पनि छैन, कही केही भको छैन । यस्तो तहल्का कसरी मच्चिएको छ के भएको हो । नेपाल जस्तो देशमा पनि सदाचारको कुरा गर्ने ? सदाचार भन्ने ? भन्न पाईन्छ ? चलिरहेको धन्दा बन्द गर्दिने ? यस प्रकारको कुरो रहेछ । कुन कुन देशमा सदाचार भन्न पाईने ? कुन कुन देशमा कानून अन्तरर्गत चल्न पर्ने, कुन कुन देशमा कानून नमाने पनि हुने ? कुन कुन देशमा वेथिति हुनु पर्ने ? कुन कुन देशमा प्रदर्शन स्थल तोकिन पाउने ? कुन कुन देशमा जहाँ पनि प्रदर्शन स्थल हुने ? सद्धे र पागल छुट्टिन नपर्ने ? नाङ्गै मान्छे, एक्लो मान्छे, नाङ्गै के सनकले माग के हो थाहा छैन । कहिले कसैलाई केही बताएको छैन । माग केही वताएको छैन । अश्लिता पूर्वक अब मानव समाजमा नाङ्गिनु पनि अश्लिता होईन, सार्वजनिक ठाउँमा भने त, होईन भने केही माग मागेको छैन । केही कुरा भनेको छैन । केही कुरा, केमा असन्तुष्टि त्यो पनि थाहा छैन । अचानक मान्छे निश्किन्छ नाङ्गै । के हो भन्दा खेरी मेरो विरोध । के को विरोध ? सरकारको विरोध । किन विरोध भन्दा सरकार मन परेन । अव यो कुरालाई पनि यस्तो त राम्रो भएन भन्दा खेरी यहाँ फ्रिडम अलिक ईस्कुजिङ्ग भैराख्या छ ।
स्वाधीनता, स्वतन्त्रताका हकहरु खुम्चिदो छ भन्ने त्यही कुरा पु¥याएका रहेछन् डार्वोसमा पनि, न्यूयोर्क टाईमसका पब्लिसर, सम्पादक जे हुन्, त्यस स्तरका मान्छेले त्यस्ता हल्ला बाटै राम्रो कुरा नबुझिकन नेपालको बुझ्न त गाह्रो त छैन नि । नेपाल राम्ररी नबुझिकन मण्डलामा नाच्न पाईएन, उफ्रिन पाईएन भनेर भन्छ नि स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र त सकिए छ त नेपालमा त । मण्डलामा उफ्रिन नपाएपछि त खोई प्रजातन्त्र ? यस्तै सुनाएका हुँदा हुन् । तर यो सही कुरा होईन । प्रजातन्त्र मण्डलामा उफ्रिनु र प्रजातन्त्रका बीचको सम्बन्ध कुनै छैन । मण्डला विरोध प्रर्दशनको ठाउँ पनि होईन र पुजनीय ठाउँ हो र त्यो आम सभा गर्ने ठाउँमा पनि होईन । विरोध प्रर्दशन गर्ने, उफ्रिने, कट्टु पेटिकोटवाला ठाउँ पनि होईन त्यो । जसलाई जे जे लगाउन मन छ लगाए भयो । तर कुन ठाउँको प्रयोग कसरी गर्ने ? कसलाई प्रसिद्ध हुन मन लाग्छ, कसलाई अखवारमा आउन मन लाग्छ, कसलाई मिडियामा छाउन मन लाग्छ, कसलाई सेलिवे्रटी हुन मन लाग्छ, गरे भो । यहाँ त के भर्खरका जवान मात्र होईन ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश भइ सकेकाहरुसम्म पनि सेलिव्रेटी अच्चम लाग्छ । तमासा, मैले कहिले विद्धताको दावी ग¥या छु र ? मैले ईमानको मात्र दाबि ग¥याछु । ईमान मात्र मसँग पूर्णत छ । म सँग पुर्ण विद्धता छ, पूर्ण ज्ञान छ भैले भन्या छैन । ज्ञान पूर्ण हुनै सक्दैन् । मैले आफुलाई विद्धान भनेको पनि छैन । पढाई लेखाई नभएको मुर्ख भन्न मण्डला किन पुग्न पर्छ र ? घरैबाट भने पनि हुन्छ, त्यति गरेपनि हुन्छ । फेरि मैले दावि नै गरेको छैन म विद्धान हुँ, होईन, म विद्धान होईन । म ईमानदार मात्रै हो । म ईमानदार मात्र हुँ । मैले भनेको छु, म विद्धान होईन । अनि विद्धान होईन भनेर गालि गरिरहनु पर्ने के छ र ?
–तपाईले मलाई सोध्नु भएको प्रश्नमा नि, मिडिया, मिडियाको सन्दर्भमा यो मिडिया फे्रन्डिली म छैन भन्ने पनि होईन । मलाई त्यस्तो लाग्दैन । मिडिया मेरो विरुद्धमा छ भन्ने पनि लाग्दैन । मैले मिडियाबाट पुराका पुरा सहयोग पाएको छु । मलाई मेरा साथीहरुले आलोचना गरिराख्या छन् । टिप्पणी पनि गर्छन् । साथ पनि दिन्छन नि त । साथ पनि दिईराख्या छन् । त्यस काराण हाम्रो लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक प्रणाली कलिलो–कलिलै छ । कहाँ आलोचना गर्ने ? कहाँ टिप्पणी गर्ने ? कहाँ नगर्ने ? कहिले कहिले छुटिदैन् । तलमाथि पर्न सक्छ, त्यति मात्र हो । सञ्चार माध्यमले पनि कहिले कहिले अब यो सञ्चार माध्यमले पनि कति भयो । उमेर नै कति भो ? मोटा मोटी १०, १५ वर्ष २० वर्ष भयो होला । यस बीचमा एक दम परिपक्कता आउनु पर्छ भन्ने केही छैन ।
यो परिपक्कता लोकतान्त्रिक अभ्यासमा पनि नआएको हुन सक्छ । सञ्चार माध्यममा पनि नआएको हुन सक्छ । यस्ता कुराहरु प्रति, साना तिना कुराहरु, साना तिना चुकहरु प्रति अथवा कहिले कहिले मान्छे हो कुनै कुनै सम्पादकलाई, कुनै कुनै रिर्पाेटरलाई, कुनै कुनै पब्लिसरलाई कसलाई केमा झोक चल्ला, अलिकति केही लेखला । यसको अर्थ मिडिया मेरो विरुद्धमा गयो, सरकारको विरुद्धमा गयो भन्ने होईन । म त्यस रुपमा बुझ्दिन् । यति फे्रन्डिली छ, यति फे्रन्डिली छ अत्यन्तै आत्मिय । मेरो मन नपरेको कुरा पनि मिडियाले भनिहाल्छ । मिडियाको मन नपरेको कुरा पनि मैले भनिहाल्छु । यति खुलस्त, यति आत्मिय छ नि ।
–यसका केही पक्षहरु छन् । यदि तपाईले यो नयाँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रामक प्रणाली र संविधान कार्यान्वयनको र हाम्रो अगाडि बढ्ने बाटोको आधार जग तयार गर्ने र समुचित गर्ने पक्षमा हेर्नु भो भने पूर्णाङ्क १० तर तपाईले दिनुहुन्छ १५, पूर्णाङ्क भन्दा डेढा बढी..
अब जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने कुरामा यति छिटो सम्भव हुँदैन थियो पनि । केही केही यो कम्लिकेशन, जटिलताहरु त्यसको बीचमा भन्दा पनि यो प्रदेशको अधिकार भित्र हो कि ? केन्द्रको अधिकार हो कि ? स्थानीय तहको हो कि ? जस्ता अन्योलले केही केही जनतामा इरिटेशन पैदा हुने, केही केही असन्तुष्टि पैदा हुने र डेलिभरी नहुने । अर्को केही केही सच्याउनु पर्ने कुराहरु जस्तो सेवा केन्द्र त हामीले तोक्यौँ । तर जिल्लामा भएका कार्यालयहरु अव ४।५ वटा जिल्लाको एक ठाउँ । एउटा जिल्लामा जादा त्यसले समस्या पैदा गरेको छ केही । यसलाई पुनर्विचार गर्नु पर्ने हो कि ? यो एउटा चिन्तनीय पक्ष छदैछ । यी पक्षमा जसले जनतामा ईरिटेशन बढाएको छ, अलिक असन्तुष्टि बढाएको छ । यी पक्षहरुलाई हेर्दा खेरी १० भन्दा अलिकति कम दिनुपर्छ ।
अर्को पार्टीको छ २ जना क्याप्टेन हुनुहुन्छ यसमा छुट्टै कुरा गरौँला अर्को क्याप्टेन सँगै । तपाईलाई नै सबै थोपर्ने, किन थोपर्ने ? तपाई यो सरकारको क्याप्टेनका हिसावले, टिम लिडरका हिसावले, टिम वर्कको पर्फमेन्स, त्यो टिमप्रतिको तपाईको आशालाई तपाईले नम्वरमा वा त्यसको आसयमा, कसरी बताउने, कति, कसरी अभिव्यक्त गर्न चाहनु हुन्छ ?
र, अन्तिममा प्रधानमन्त्रीज्यू, एक वर्ष पुरा भयो । पार्लाइमेन्टको बारेमा मैले बताउनु परेन । यसका नम्सका, तत्वका बारेमा यहाँलाई पनि राम्रो सँग थाहाँ छ । जे बजारमा सुनिदै छ वा क्याबिनेट तपाइका टिमका बारेमा, त्यसलाई म कारवाही पनि भन्दिन वा हटाउने पनि भन्दिन । यसको हेरफेर अघि भन्नु भयो नि मुटु, फोक्सो, कलेजो, त्यसको मृगौला, त्यसका हात, त्यसको खुट्टा तिनीहरु ठिक ठिक ठाँउमा परे वा परेनन भनेर रिभियू गर्ने बेला भयो ? अथावा गर्न थाल्नु भयो ? गर्न थाल्नु हुन्छ यसपटक ?
अन्तिममा पश्न सोधे प्रधानमन्त्रीज्यू, इमान्दारिका साथ इमान मात्र भनेको हुनाले मैले भने । यो एक वर्षमा जानेर त तपाईबाट हुने कुरा भएन अन्जानवस् आँफैबाट ठ्याक्कै यही नभने पनि यही पक्षमा मेरो पक्षवाट पनि चुक भयोकि भन्ने यहाँलाई केही लागेको छ ?
प्रकाशित मिति : ४ फाल्गुन २०७५, शनिबार २३:३५